Bizzabo: Ike Gị-Onye na Virtual Ihe na a Single Platform | Martech Zone
Bizzabo bụ usoro ihe omume na-aga nke ọma nke na-enye ndị otu gị ngwaọrụ niile ha chọrọ iji mepụta ihe omume na-akwụghachi ụgwọ mgbe ị na-eche echiche iji nyere gị aka ịme ihe n'ụzọ ị na-echeghị na ọ ga-ekwe omume.
Bizzabo Omume Platform Atụmatụ
Bizzabo niile na-na-otu software omume na-enyere mmadụ aka ma ọ bụ mebere ihe omume iji nyefee ahụmịhe ndị bịara ọpụrụiche pụrụ iche site na itinye aka na ọgụgụ isi dabere na ọgụgụ isi na ebumnuche.
Ndebanye ihe omume - jiri nlezianya dozie onye ọbịa gị na ahụmịhe ndị bịara ya na ụdị bara ọgaranya na nke dị egwu, ọtụtụ ụdị tiketi.
Ebe nrụọrụ weebụ - wulite webusaiti emeputara nke nwere ihe editọ siri ike nke ejikọtara ya na sọftụwia ihe omume na ihe omume gị.
Gwa - Ziga ozi email na mkpọsa nkwado na-akpali mmasị na ndebanye aha site na enyemaka nke ọdịnaya ahaziri.
-arụ - ịkwanye ọkwa, ịkparịta ụka n'-ntanet, usoro mmekọrịta, na ịme ntuli aka na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ndị bịara gị na-etinye aka-na ma na mpụga ngwa ihe omume mkpanaka.
Monetize - Nye ndị na-akwado gị ohere pụrụ iche, gụnyere nsị nchapụta omenala, onyinye pụrụ iche, ihe ngosi akpaghị aka na-ada ụda, nkwado nkwado, yana data iji tụọ onye na-akwado ROI n'ụzọ ziri ezi.
Report - Mkpesa miri emi na-eme ka ọ dịkwuo mfe ka otu gị ghọta otú ihe na-eme ma e jiri ya tụnyere akara ngosi. Debe ebumnuche, soro ego na ntinye aka, na ndị ọzọ.
Bizzabo na-enyere ụlọ ọrụ aka ịlele, jikwaa, na ịhazigharị ihe omume sitere na nsonaazụ azụmaahịa bụ isi - na-enye ndị nhazi ọ bụla, ndị na-ere ahịa, ndị ngosi ngosi, na ndị bịara ya ikike iji gosipụta ike nke mmemme ọkachamara.
Ihe omume Virtual nke Bizzabo
Bizzabo na-enyere ụlọ ọrụ aka iru oke nke ndị na-ege ntị na itinye aka na ahụmịhe ndị (ihe fọrọ nke nta) dị ka ihe dị egwu dị ka ihe omume mmadụ, ebe ọ bụla ndị bịara gị nọ. Site na ngwụcha njedebe ha, ị na-enwe ike ịnapụta mgbasa ozi dị elu yana vidiyo na-achọ ọnụ ọgụgụ yana azịza ụlọ ọrụ. Atụmatụ gụnyere:
Live stream dum ihe ma ọ bụ kpọmkwem sessions ka uwa na-ege ntị nke ọ bụla size na a na-eduga video n'elu ikpo okwu, kwadoro site na Kaltura.
Ewubere ya na ọkwa nchekwa na ọkwa nzuzo kachasị elu iji hụ na echedoro data gị ma na-agbaso iwu.
Jirichaa ego nkwado na ntinye vidiyo na mgbasa ozi na ntinye ego na mmemme gị niile.
Gbanwee ihe ngwọta nke Bizzabo ma jikọọ na teknụzụ vidiyo ị họọrọ.
Bizzabo Na-enyekwa Ọrụ Mmepụta Virtual
Otu Bizzabo's Virtual Production Services otu na-enye ọrụ njedebe na ngwụcha gụnyere arụmọrụ zuru ezu, ọdịyo na nlele, imewe, mmejuputa, na ndị ọzọ.
Site na ịkwadebe ndị na-ekwu okwu na ndị na-eme mgbanwe na mgbasa ozi a na-emepụta nke ọma, Bizzabo na-enye ọtụtụ ọrụ iji dabaa mkpa mmemme gị.
Bizzabo ike ihe maka ụdị dị ka Forbes, Hubspot'INBOUND, Dow Jones, Nlekọta, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ Boaz Katz, Alon Alroy, na Eran Ben-Shushan hiwere ụlọ ọrụ ahụ, ma nwee ihe karịrị ndị ọrụ 100 na ọ bụ ụlọ ọrụ New York na Tel-Aviv.
Tags: bizzaboogbako ngwaogbako ahiaịkparịta ụka n'socialntanet